Usikhuphela njani iSatifikethi se-COVID kumnini wekhadi le-iPhone yakho | IPhone iindaba
Usikhuphela njani iSatifikethi se-COVID kumnini wekhadi lakho le-iPhone
ULuis Padilla | | Izaziso, Izifundo kunye neencwadana
Ukuba sele ugonyiwe ngokupheleleyo okanye udlulisile usulelo lwe-COVID ungacela i Isatifikethi se-COVID saseYurophu onokuzikhuphelela kwi-iPhone yakho ukuba zibekhona kumnini wekhadi lakho. Sichaza indlela inyathelo ngenyathelo.
Isatifikethi se-COVID saseYurophu siyafumaneka kwabo bagonyelwe i-COVID-19 okanye abanesifo. Ifikeleleka kwiwebhusayithi yoMphathiswa Wezempilo okanye iinkonzo zempilo zoLuntu oluZimeleyo, inokukhutshelwa ngefomathi yePDF ukuyiprinta okanye unayo kwi-iPhone yakho. Kwaye ngoku iyahambelana nesiphathi seKhadi se "Wallet" kwi-iPhone yakho ukuba nayo kakhulu ngakumbi, kwaye kwiwebhusayithi yoMphathiswa Wezempilo, akukho nto inokunika idatha yakho kwezinye iiwebhusayithi okanye usetyenziso. Ungayifumana njani?
Ukuze usicele, kufuneka ube unesatifikethi seDijithali. Ukuba uyenza kwikhompyuter kuya kuba lula, kwaye ngesicelo se-Autofirma uya kuba nakho ukugqibezela usetyenziso. Kuba i-iPhone okanye i-iPad inzima ngakumbi, kuya kufuneka ube nesisigxina Cl @ ve ukuze ukwazi ukusebenzisa utyikityo Cl @ ve. Ukuba awuyazi le nto ndithetha ngayo, kungcono uyenze kwikhompyuter kunye nesatifikethi kunye nesicelo sokuzityikitya.
Kuya kufuneka ungene kwiwebhusayithi yoMphathiswa Wezempilo ukuze oku (unxibelelwano) kwaye ulandele amanyathelo abonisiweyo. Kubalulekile ukuba ungashiyi iwebhusayithi yoMphathiswa, kuba ukuba usebenzisa enye iwebhusayithi awuyi kuba nakho ukuyikhuphela kwiWallet. Ukuze uzichonge uyakufuna isiQinisekiso seDijithali esifakwe kwikhompyuter yakho. Emva kokuphendula eminye imibuzo malunga nokuba ngaba ubunesi sifo okanye ukuba uye wagonywa, kwaye nalapho ugonyiwe, uyakufikelela kwifom yesicelo.
Kule fomu kubalulekile ukuba ujonge ezantsi, ukuze uphawule ukuba ufuna ukufumana isatifikethi kwifomathi yeWallet okanye yePasipoti. Kuya kufuneka ugcwalise onke amasimi abonisiweyo ukuba ukwazi ukuya kwinqanaba elilandelayo.
Eli lelona candelo libaluleke kakhulu kuyo yonke le nkqubo. Kwikhompyuter, kuya kufuneka usebenzise i-Self-signature app kunye neSatifikethi sedijithali ukuze ukwazi ukugcwalisa usetyenziso. Kwi-iPhone nakwi-iPad kunzima kakhulu, kuba akukho AutoSignature. Kuya kufuneka ubhalise kwi-Cl @ ve kwaye ube ne-Cl @ ve ngokusisigxina, ukuze usebenzise i-Cl @ ve utyikityo kwaye ugcwalise isicelo. Uya kuza umhla apho zonke ezi nkqubo ziya kuba lula ngakumbi kodwa ukuza kuthi ga namhlanje, kusesisihogo ukujongana newebhusayithi zolawulo.
Ukuba ukwazile ukoyisa yonke le nkqubo, kwimizuzu embalwa (ngamanye amaxesha iyure) uyakufumana i-imeyile kunye neSMS enelinki yokukhuphela isiQinisekiso kuMgcini weKhadi okanye usetyenziso lweWallet. Njengokuba ibilikhadi letyala, ungayibonisa ngokucofa iqhosha elisecaleni kabini Ukusuka kwi-iPhone yakho. Ikwabandakanya ulwazi malunga nogonyo lwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Usikhuphela njani iSatifikethi se-COVID kumnini wekhadi lakho le-iPhone
Kunyaka olandelayo ii-iPhones kunye neeMac ziya kongeza ii-processor ze3nm
Ukuphuculwa okumangalisayo kwikhamera ye-iPhone 13